Uyenza njani i-Daniel Fast Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ungamzila njani uDaniel. Ukwenza ukuzila ukutya kukaDaniel, kuyafuneka ukuba ukhawuleze, uphephe ukutya izinto ezimnandi kuwe. Injongo kukuba nobudlelwane ngakumbi noThixo, uncame ulonwabo lokutya okwexeshana. Ukuzila kukaDaniel kunokuba lide kunokuzila ukutya okupheleleyo.
UDaniel Fast ulungile kwabo bangenakukuyeka ngokupheleleyo ukutya nokuba kungasiphi na isizathu. Kukwacetyiswa kwakhona ngabo bafuna ukuzila ukutya ixesha elide ngaphandle kokubeka esichengeni impilo yabo. Umntu uyatya, kodwa alawule ukuthanda kwakhe ukutya, abeke uThixo ngaphezu kovuyo lokutya okona kutya akuthandayo.
Emva koko siza kuchaza Ungamzila njani udaniel ngendlela echanekileyo ngendlela efanayo abavakalisa ngayo izibhalo zebhayibhile. Ngaba siza kuqala?
1 Ungamzila njani uDaniel: Ukuzila kokuQala kukaDaniel
2 Ukukhawuleza kweentsuku ezingama-21
3 Uyenza njani inzilo kaDaniel?
4 Kude kangakanani ukuzila ukutya kukaDaniel?
Ungamzila njani uDaniel: Ukuzila kokuQala kukaDaniel
Ukuzila kokuqala awakwenzayo uDaniyeli, UHananiya, UMisael y Azariya, kwakufuneka ayeke ukutya ukutya kokumkani waseBhabheli. Babesitya kuphela imifuno, imifuno kunye namanzi ngalo lonke ixesha beqeqeshwa ukusebenzela ukumkani.
UDaniel wacela imvume kubaphathi bakhe kwaye wenza uvavanyo lweentsuku ezili-10 ukubonisa ukuba ukutya bekungayi kuyibeka esichengeni impilo yakhe. Kufanelekile ukukhumbula oko Ugxininiso lukaDaniel lwalukuThixo, UDaniel akazange azile ukutya ukuze ajongane okanye oyise abanye.
Ukubonisa ubuhle bakhe, uDaniel uqhubeke nokutya ngexesha leminyaka emi-3 yoqeqesho kwibhotwe laseBhabheli.
Ngomnyaka wesithathu wobukumkani bukaYehoyakim ukumkani wakwaYuda, kweza uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli eYerusalem, wayingqinga.
INkosi yamnikela esandleni sakhe uYehoyakim ukumkani wakwaYuda, inxenye yempahla yendlu kaThixo; bazizisa kwilizwe laseShinare, endlwini yothixo wabo, yaye
Wazibeka ezo zinto endlwini yobuncwane bothixo wakhe.
Wathi ukumkani kuAshpenazi, umthetheli-mathenwa akhe, makazise abakoonyana bakaSirayeli, oonyana bokumkani;
amakhwenkwe angenasiphako, akhangelekile, afundiswe ngobulumko bonke, anobulumko besayensi nokuqonda okuhle,
kufanelekile ukuba kwibhotwe likakumkani; nokubafundisa iileta nolwimi lwamaKaledi.
Ukumkani wabamisela umamkeliso wemini ngangemini yawo, ekudleni kokumkani nasewayinini ayiselayo, kwaye wabavusa iminyaka emithathu, ukuze ekupheleni kwe
baya kuvela phambi kokumkani.
Phakathi kwabo yayinguDaniel, uHananiya, uMisael, noAzariya, bakoonyana bakaYuda.
Abathetheli-mathenwa wabathiya amagama; kuAnaniya, kwathiwa nguShadraki; kuMisael, uMesaka; nakuAzariya, uAbed-Nego.
Ke kaloku, uDaniyeli wayegqibe entliziyweni yakhe, ukuba angazingcolisi ngokudla kokumkani nangewayini ayiselayo; Ubuzile ke, umphathi we
Amathenwa makanganyanzelwa ukuba azenze inqambi.
UThixo wenza uDaniyeli ukuba afumane inceba nemfesane phambi komthetheli-mathenwa.
Umthetheli-mathenwa wathi kuDaniyeli, Ndiyayoyika inkosi yam ukumkani, omise eniya kukudla neniya kukusela; kakuhle emva kokubona ubuso bakho
Imfitshimfitshi kunamakhwenkwe afana nawe, uya kuyigweba intloko yam kukumkani.
Waza uDaniyeli wathi kuMelsari, obekwe yintloko yamathenwa phezu koDaniyeli, noHananiya, noMisayeli, noAzariya,
Ndiyakucela ukuba wenze ityala kunye nabakhonzi bakho iintsuku ezilishumi, kwaye usinike imifuno yokutya kunye namanzi okusela.
Emva koko thelekisa ubuso bethu nobuso bamakhwenkwe atya ukutya okuvela kukumkani, emva koko wenze nabakhonzi bakho
Yabaphulaphula ke kweli lizwi, yabalinga iintsuku ezilishumi.
Kwaye ekupheleni kweentsuku ezilishumi ubuso babo babonakala bungcono kwaye bomelele ngakumbi kunamanye amakhwenkwe atya kwinxalenye yesidlo.
UMelsar ke wathabatha isabelo sabo sokutya newayini ababeza kuyisela, wabanika imifuno.
UDaniel 1: 1-16
Uyafunda Ungamzila njani uDaniel
Ukukhawuleza kweentsuku ezingama-21
Ukuzila ukutya kukaDaniel iintsuku ezingama-21 kusekwe kwisibini Ukuzila ukutya okwenziwa ngumprofeti uDaniyeli eBhabheli. Kuya kufuneka uyazi ukuze uyenze ngokukhawuleza iDaniel.
Koku kuzila ukutya kuthathe malunga neeveki ezi-3, UDaniel wayengatyi nyama okanye into enencasa kwaye engaseli wayini. Kwaye akazange azithambise ngelo xesha. Ngesi sihlandlo, uDaniel wachitha iintsuku ezingama-21 elila kwaye ebongoza kuThixo.
Ngaloo mihla mna, Daniyeli, ndandixinezeleke iiveki ezintathu.
Khange nditye into emnandi, nenyama okanye iwayini khange ndingene emlonyeni wam, kwaye andizithambisanga ngeoli, zada zaphela iiveki ezintathu.
UDaniel 10: 2-3
Ukuzila ukutya kweentsuku ezingama-21 kuye kwathandwa kwaye namhlanje sifumana iifomula zika "Daniel Fast" ezahlukeneyo. Yintoni enokubonwa kule ntsuku yeentsuku ezingama-21 kukuba UDaniel wayeka ukutya kunye nezinto ezonwabisayo njengendlela yokufuna uThixo.
Ukuzila ukutya akunanjongo yobuhle, kwaye akufuneki kube yindlela yokuzibonakalisa "ungcwele" kunabanye.. Injongo yokuzila ukutya kukufuna ukusondelelana noThixo, ukungcwalisa, kwaye uqinise ukholo lwakho kuKristu.
Ukuba injongo yakho kukuthoba umzimba, yiya kukutya. Ukuba injongo yakho kukufuna uBukumkani bukaThixo, khawuleza.
Uyenza njani inzilo kaDaniel?
Akukho mithetho ichanekileyo eBhayibhileni ngokuzila ukutya ngokungaphelelanga. Umntu ngamnye kufuneka athathe isigqibo ngento angayityi, angaseli okanye ayenze ngexesha lokuzila. NjengoDaniel, okunye ukutya okumnandi ekufuneka kuthintelwe kubandakanya:
Iziselo ngaphandle kotywala
Ezinye izinto ozithandayo
Ukongeza kukutya, unokukhawuleza nakwiminye imisebenzi emnandi, enje:
Ukuzonwabisa (iTV, i-cinema, imidlalo ...)
Ubundlobongela ngesondo (ngemvume yeqabane)
Ingqalelo! Ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Bona into onokuyenza ngokubhekisele kwimpilo yakho nakwimeko yosapho. Akunyanzelekanga ukuba uzinxweme kuzo zonke ezi zinto, kodwa yenza ukuzibophelela ekuthinteleni kwinto ethile.
Sebenzisa ixesha lakho lokuzila ukutya ukuthandaza, ukufunda iBhayibhile, kunye nokufuna ukhokelo lukaThixo. Yinjongo yokuzila ukutya. Ngexesha lokudakumba kwendalo, funa intuthuzelo kwiLizwi likaThixo.
Kude kangakanani ukuzila ukutya kukaDaniel?
Abantu abaninzi balandela umzekelo kaDaniel kwaye bazila ukutya ngexesha Iintsuku ze21. Kodwa ukuzila ukutya kungagcina yonke ixesha elimiselweyo, ngokwentando kaThixo. Ukuba ucinga kungcono ukuyenza ngexesha elincinci, akukubi. Ukuba ufuna ukuyandisa, akukho ngxaki nayo.
Thandaza kwaye usete ixesha lokuzila. Ukuba ngexesha lokuzila uziva uvela kuThixo ukuba uyeke okanye wandise ixesha, thobela uThixo. Into ebaluleke kakhulu ekuzileni ukutya kukulandela ukuthanda kukaThixo kwaye hayi kuphela ukuhlangabezana neenjongo.
UThixo uya kukusikelela ngexesha lokuzila. Asinokwazi ncam ukuba kuzakwenzeka ntoni ngelo xesha, kodwa uThixo uza kwenza ngokwemfuno. Lowo umfunayo uThixo uyamfumana.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uqonde indlela yokwenza uDaniel ngokukhawuleza ngokuchanekileyo. Ukuba ngoku ufuna ukuqhubeka nokufunda iikhonsepthi zakwalizwi kwaye wazi zithini iziphumo zesono, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.